Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa maanta shaaca ka qaaday in gobolka Iowa uu siin doono tal | KWIT
Somali News 12.03.2020
Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay, Reynolds wuxuu ku sheegay in qaybinta ugu horreysa ee dadka guryaha lagu xanaaneeyo ay bilaabmi doonaan 13-ka Diseembar. Waxaa jiri doona shixnad 26,000 qaadasho ah oo tallaal ah oo ay soo saartay shirkadda Pfizer. Iowa ayaa heli doonta qiyaaso dheeri ah bisha Diseembar, oo ay kujirto talaalka Moderna, wadar ahaan 172,000 qaadasho dhamaadka bisha.
Tallaallada waxay u baahan yihiin laba qiyaasood.
Dadweynaha guud ma awoodi doonaan inay helaan tallaalka illaa lix bilood.
Toddobaadkan gobolka warbixinnada in ka badan 100 kun oo qof ayaa laga helay cudurka loo yaqaan 'coronavirus' bishii Nofeembar, in ka badan 600na waxay u dhinteen COVID-19. 70 qof oo kale oo ku nool Iowa waxay u dhinteen COVID-19 24-kii saac ee la soo dhaafay. Taasi waxay ahayd kororkii ugu weynaa ee maalin un kordha tan iyo markii cudurka faafa uu yimid gobolka.
Degmada Woodbury waxay diiwaangelisay shan dhimasho iyo 146 kiis oo cusub oo ku saabsan cudurka cusub ee coronavirus maanta. Gobolka wuxuu kudaray 19 dhimasho wadarta guud usbuucan. Wadartaas waxay hadda mareysaa 135. Sida laga soo xigtay Sioux City Journal, Sioux County ayaa soo warisay seddex dhimasho oo cusub, gobolada Plymouth iyo Monona midkiiba wuxuu diiwaan galiyay labo. Degmooyinka Lyon, O'Brien, Ida, iyo Yankton mid waliba wuxuu tibaaxay hal dhimasho.
Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo werisay in 100 bukaan la jiifiyay maanta COVID-19 midkoodna MercyOne Siouxland Medical Center ama UnityPoint Health - St. Saddex meelood oo meel bukaanadaas waxaa la seexiyay isbitaalka sababtoo ah coronavirus.
Booliska Magaalada Sioux ayaa dhawaan bilaabay isticmaalka kamaradaha jirka. Waa tallaabo ay golaha deegaanku ansixiyeen xagaagii oo ay masuuliyiintu rajaynayaan inay dhisto kalsooni iyo isla xisaabtan.
Dhamaan saraakiisha labisan, saraakiisha kheyraadka iskuulka, iyo howlwadeenada baaritaanka gaarka ah mid walba wuxuu leeyahay kaamirada jirka. Shir Jaraa’id oo uu maanta qabtay, Taliyaha Booliska Rex Mueller wuxuu ku sheegay in kaamirooyinka la daari doono markasta oo askartu ay la macaamilaan shacabka.